How to Jailbreak and Activate Without Sim Card in iOS 6.1.2 for A4 Devices (iPhone 4,iPhone 3GS – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Fire & Forget Final Assault v1.0 Apk Game 110MB FlashLight HD LED Pro v 1.52 for android(update) Huawei U8815(G300) root လုပ်နည်း (baseband 2030 root) Y200 (U8655) root လုပ်နည်း Super Video, Floating & Popup v1.6.9 for android(latest version) Home
Published On: Fri, Feb 22nd, 2013 iOS tutorials / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By သက်နိုင်စိုး How to Jailbreak and Activate Without Sim Card in iOS 6.1.2 for A4 Devices (iPhone 4,iPhone 3GS
ပို့စ်ရေးသားသူ- မင်းကုသ @ Nicky Paing (MMAS)
A4 devices(iPhone 4,iPhone 3GS) ကို Sim Card မရှိပဲ iOS 6.1.2 ကိုတင်ကြတဲ့အခါ iTunes က Activate လုပ်ခိုင်းပါတယ်။Sim card မရှိပဲ Activate လုပ်ဖို့ကကျတော့ Jailbreak လုပ်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်။ iOS 6.1.2 ကို Jailbreak လုပ်ဖို့ Evasi0n 1.4 ထွက်လာပြီဆိုပေမယ့်သူကလည်း Device ကို Activate လုပ်ထားမှ Support လုပ်တယ်။ဒီနေရာမှာတစ်ချို့လူတွေကအကုန်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်မငြင်းတော့ပါဘူး။Sim မရှိပဲ Actiavte လုပ်မယ့်သူတွေ ကျွန်တော်လို့ပြသနာကြုံလာခဲ့ရင်ဖြေရှင်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးဒီပို့စ်ကိုရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံက iTunes က Activate လုပ်ခိုင်းတဲ့ပုံပါ။နောက်တစ်ခုက Evasi0n ကSupport မလုပ်တဲ့ပုံပါ။
အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က Activate လုပ်ဖို့ redsn0w_win_0.9.15b3 ကိုသုံးရပါမယ်။
Download redsn0w_win_0.9.15b3 ( http://www.mediafire.com/?3alsd98ztop4l3r )
Download Evasi0n 1.4 ( http://www.mediafire.com/?o7m4ys4vdq7sl79 )
Donwload ipsw 6.0
iphone 4(GSM) >> http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7177.20120919.xqoqs/iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
iphone3GS >> http://appldnld.apple.com/iOS6/Restore/041-7173.20120919.sDDMh/iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
၁။ Redsnow ကို Run ပါ။ Extras>>Select IPSW မှာ iOS 6.0 ipsw ကိုရွေးပေးပါ။Confirm Box ပေါ်လာပါက Ok နှိပ်ပါ။
၂။ Back ပြန်နှိပ်ပြီး Jailbreak လုပ်ပါ။Device ကိုပါဝါပိတ်ပြီး DFU Mode ၀င်ပေးလိုက်ပါ။(ပါဝါမပိတ်ပဲတိုက်ရိုက် DFU mode ၀င်ပေးလဲရပါတယ်)။Jailbreak Process လုပ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
၃။ Device က Reboot ကျသွားပြီးပြန်တက်လာတဲ့အခါRedsnow ကနေ Back ပြန်နှိပ်ပြီးExtras>>Select IPSW မှာ iOS 6.0 ipsw ကိုရွေးပေးပါဦး။ပြီးရင် Just Boot ကိုနှိပ်ပါ။ဖုန်းပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာ Tethered Jailbreak လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက် Device ကို Set up လုပ်ပြီး Home Screen ရောက်သည်အထိ Activate လုပ်ပေးပါ။
((((အောက်ကအဆင့်(၄)Evasi0n 1.4 ကိုမသုံးမီ Cydia မှ Search>>evasi0n 6.0-6.1 Untethered ကို install လုပ်ကြည့်ပါ။တစ်ကယ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကအဆင့်တွေလိုက်လုပ်စရာမလိုတော့ပဲ Untethered Jailbreak အဆင့်သို့အောင်မြင်စွာရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဒီပို့စ်ရေးနေချိန်အထိ Cydia မှာရှိနေသော evasi0n 6.0-6.1 Untethered ဟာ iOS 6.1.2 ကို Support မလုပ်သေးလို့ပါ။))))
၄။ Evasi0n 1.4 ကို Run ပါ။Jailbreak button လေး active ဖြစ်နေရင် Jailbreak ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၅။ အောက်ကပုံအတိုင်းရပ်နေလျင် device ကို slide to unlock လုပ်ပြီး ဒုတိယစာမျက်နှာမှာ၇ှိနေသော Jailbreak ဆိုတဲ့ icon လေးကိုတစ်ချက်ပဲနှိပ်လိုက်ပါ။Black screen ဖြစ်သွားပြီးတစ်စက္ကန့်အတွင်း home screen သို့ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
၆။ Evasi0n ကဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါပြီ။Jailbreak က Complete ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် Exit button လေး active ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ထိုအခါ ဖုန်းကို power ပိတ်ပြိး ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။Evasi0n icon အကြီးနဲ့ပေါ်လာပြီး Reboot ခဏကျသွားပါလိမ့်မယ်။
Slide to unlock မပေါ်လာမခြင်း ဖုန်းကိုဘာမှသွားမလုပ်မိပါစေနဲ့။ Slide to unlock ပေါ်လာပြီဆိုပါကSlide ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီးဒုတိယစာမျက်နှာမှ Cydia ကိုဖွင့်ပြီး User ကိုရွေးပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ဒါဆိုရင်တော့သင်ရဲ့ iOS 6.1.2 တင်ထားသော iPhone ကို Sim Card မရှိပဲအောင်မြင်စွာ Jailbreak & Activate လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။
11 comments on “How to Jailbreak and Activate Without Sim Card in iOS 6.1.2 for A4 Devices (iPhone 4,iPhone 3GS”	ykh on February 24, 2013 at 11:28 am said:
3gs ၆.၁၂ တင်ပြီးသွားပြီ…no service ဖြစ်နေတယ် cydia ထဲက…ultrasno…လဲတင်ပြီးသွားပြီ..မရဘူး…ကူညီပါ…
Reply ↓	AHS on February 24, 2013 at 11:51 am said:
ဟုတ်တယ်….ကျွန်တော် လဲ အဲအတိုင်းဘဲဖြစ်နေတယ် ကူညီပါ
Reply ↓	PYI THEIN on February 28, 2013 at 9:56 am said:
အကိုတို. iphone5 မှာ jiabreak icon မပေါ်ဝူးဖြစ်နေတယ်ဗျ
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မြန်မြန်လေးပြောပြကြပါဗှာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မုန်.တေအများကြီးဝယ်ကျွေးမယ်လေနော်
Reply ↓	Oo Guna on March 1, 2013 at 12:24 am said:
iPhone4s ပါ။ အဆင်ပြေပါတယ်…ဂျေးဘရိတ်က လေ။Siri ကို ဘယ်လိုadd လဲမသိဘူးနော်။အဲဒါ Siri ကို သုံးလို့မရဖြစ်နေပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ညွှန်းပါဦးနော….gmail ကိုဖြစ်ဖြစ် စာနဲ့လှမ်းပို့ပေးလို့ ရပါတယ်။ကျေးဇူးပါနော်……..
Reply ↓	JUSTIN WIN on March 19, 2013 at 8:56 am said:
setting မှာရှာပြီး siri ကို on လုပ်ပေးရုံပါပဲ့
Reply ↓	Pin pin on March 6, 2013 at 3:26 am said:
ကျန်တာအာလုံးအဆင်ပြေတယ် Internetသုံးလို့3G ဖွင့်ရင်တော်တော်နဲမရဘူး ၃မိနစ်လောက့်စောင့်ရတယ် မပွင့်ချင်လဲမပွင့်ဘူး Versionကြောင့်လား ဘယ်လိုလုပ်ရင် အဆင်ပြေမလဲ ကူညီပေးပါအုံး
Reply ↓	Ti Ha on March 8, 2013 at 12:31 am said:
ကျွန်တော့်ဖုန်းက Cydia ကို cydelete နဲ့ ဖျက်မိသွားတယ် ဘယ် လိုပြန်ဖော်ရမလဲ????
Reply ↓	yuki on March 13, 2013 at 1:18 am said:
thankyou very much ……my idevice is already active
Reply ↓	JUSTIN WIN on March 19, 2013 at 8:58 am said:
iphone 4s &5ပါလုပ်လို့ဆင်ပြေရဲ့လားမသိဘူး..ပြောပြပါ
Reply ↓	myokyaw on March 19, 2013 at 4:42 pm said:
ကူညီကြပါဦး iphone 3gs ကို ios 6.1.2 တင်လိုက်တာ no service ပြနေတယ်
Reply ↓	nantawwinn on April 15, 2013 at 2:32 am said:
iPhone5 iOS6.1.3 အတွက် jailbreak လေးရရင်
ုaung kyaw soe on HTC ဖုန်းများ Root မလုပ်ပဲ Zaw Gyi Font သွင်းနည်းMr.Black on Huawei C8813 အတွက် Samsung Galaxy S4 ROMMical Moe on Y200 (U8655) root လုပ်နည်းAung on Unsoftbrick Method For Samsung Galaxy Devices [Tutorial]Wai Yan on Samsung Galaxy S4 ၏ Internal Memory နှင့် Micro SD Slot တွင် အားနည်းချက်များရှိနေကြောင်း Samsung ပြောကြား Android Development